UZinnbauer kusenguye umqeqeshi wePirates ‘okwamanje’, kusho isikhulu
Isikhulu se-Orlando Pirates, uFloyd Mbele ucashe ngesithupha uma ebuzwa ngamahlebezi okuthi leli qembu lifuna uSteve Komphela azothatha umsebenzi kaJosef Zinnbauer.
UMbele akazange aphike ukuthi bayamhalela uuKomphela, kodwa waveza ukuthi lo mqeqeshi unenkontileka neMamelodi Sundowns kanti nabo banenkontileka noZinnbauer.
Uthe uZinnbauer nguyena ozoqeqesha leli qembu, kodwa izinto zingajika noma kunini. Uveze nokuthi iqembu alenelisanga ngelukuzuzile ngesizini edlule kodwa bayaziqonda izimo ezidale lokho.
“Umqeqeshi ukhona futhi ubeyingxenye yobekwenzeka ngoMgqibelo ngesikhathi kwethulwa abadlali abasha nezinhlelo zokulungiselela isizini. Usekhona,” kusho uMbele kwabeSAfm ngoLwesibili.
“Umqeqeshi uZinnbauer sekhona kwiPirates… indlela abhekane nayo nezinselelo ebezikhona ngendlela yokudlala ayisenzi sibe nesidingo sokushintsha umqeqeshi okwamanje. Kodwa lokho kungashintsha noma nini.
“Okwamanje okubalulekile wukuthi sithathe isinqumo sokulanda umqeqeshi uMandla Ncikazi. Uzokhumbula ukuthi nakudala ngesikhathi Ruud Krol akenzanga kahle kumasizini akhe okuqala amabili.
“Kwathi uma wonke umuntu ekhala ngaye, bethi akakhululwe, sanquma ukumgcina ngoba kukhona esikubonayo kuye. Kwathi ngemuva kokuba sesimlandele uCraig Rosslee izinto zajika.
“Wabe esewina izindebe ezintathu. Kunezinto ezifanayo ngesimo sikaKrol noZinnbauer uma ubheka izinselelo abanazo. Kuyathusa ukuthi abantu bahlanganisa u-1 no-1 bese befuna kuphume u-11.
“Siyazi ukuthi umqeqeshi uMandla usebenzile nomqeqeshi uSteve. USteve ungumqeqeshi omuhle kakhulu. Kodwa ngiyamangala ukuthi kungani kukhonjwe yena. Yingoba esondelene noMandla.
“USteve waya kwiChiefs, uMandla wayengekho lapho wayekwiMaritzburg (United), ngakho angazi ukuthi yini le eyenza abantu basole ukuthi ngoba nakhu uNcikazi usekithi noKomphela uyalandela.
“Akulona iqiniso ukuthi uSteve Komphela uyeza kwiPirates, hhayi okwamanje,” kuchaza uMbele. Uvumile nokho ukuthi uma izinto ziphoqa ukuthi kube noshintsho, bazobheka ukuthi ngubani otholakalayo ukuzosiza iqembu lenze kangcono.
FUNDA NALA: I-Italy iyivove inkani iSpain iyiwashisa ijezi kwi-Euro
“Nangesikhathi siletha uZinnbauer sasinaye umqeqeshi obambile kodwa sabona sengathi iqembu aliyi la silibheke ukuthi liye ngakhona. Sangenelela saletah uZinnbauer wafika noshintsho elisusa endaweni ka-12 walinyusa,” kusho uMbele.
Yize Impempe beyithole ukuthi uZinnbauer ubengakafiki ngesikhathi kwethulwa abadlali abasha ngoMsombuluko, uMbele ukuphikile lokhu. Uthe lo mqeqeshi ubuye kuleli ngeviki elidlule.
Previous Previous post: UDonnarumma uweze i-Italy wayifaka kowamanqamu kwi-Euro
Next Next post: UKgatlana ufeze iphupho ejoyina izinkunzi zaseSpain iMadrid